Soo galootiga ku cusub Iswiidhan oo dhinaca shaqada horumar ka sameeyey | Somaliska
Soo galootiga ku cusub Iswiidhan oo dhinaca shaqada horumar ka sameeyey
Dadka dalkaan ku cusub ayaa dhinaca xagga la jaanqaadista nolosha waxaa ay ku talaabsadeen horumar baaxad leh oo la tilaami karro sida uu sheegayo suuqa shaqada oo soo bandhigay tirro koob aad u sareeya.
Shirkada la shaqeeysa suuqa shaqada ee la yiraahdo Almi, ayaa sidoo kale sheegtay in shaqsiyaadka dalka cusub ee doonaya ineey sameeystaan meherado u gaar ah ay la yimaadeen niyad aad u sareeysa iyo xiiso ay u qabaan ka dhabeeynta riyadooda. Goboladda Halland, waxeey ka mid tahay deegaanada la dejiyey soo galootiga ku cusub Iswiidhan halkaas oo qaarkood ay ka abuurteen muddo gaaban gudahood meherado u gaar ah.
Dadkaas waxaa ka mid ah Bashar Al shibabi oo ka furtay warshad caanaha qeeybisa. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka warshadaasi, hase ahaatee ay adkeyd dhinaca shatiyada iyo ogolaanshaha, balse ugu dambeyntii ku guuleeystay kuna faraxsan yahay ineey isla furteen isaga iyo saaxiibkiis oo Suuriya labadooduba ka yimaadeen.
Idaacada raadiyo Iswiidhan ee p4 ee goboladda Halland ayaa sidoo kale la kulantay shaqsiyaad iyagana dalka ku cusub kuwaas oo durba muujiyey sideey uga go’an tahay ineey dalkaan ka sameeystaan meherado ay ka soo saartaan noloshooda.
Tirro koobka suuqa soo saartay ayaa sidoo kale lugu sheegay in dadka dalkaan ku cusub ee codsaday loona ogolaaday shati ama ogolaansho sameeysashada meherad u gaar ah ay kor u kacday 40% boqolkiiba afartan, waana tirro koobkii ugu badnaa guud ahaan dalka oo dhan. Dhinaca kale shirkada Almi ee gacan saarka la leh suuqa shaqada ayaa dhinacooda sheegay ineey dad gaaray 110 ruux ay ka kaalmeeyeen siddii ay u sameeysan lahaayeen meherado u gaar ah.
Gabadha la yiraahdo Hend Al Kier, waxaa ay ka timid degmadda Falkenberg, waxaa ay halkaasi ka furutay dhawaan maqaayad laga cunteeyo inkastoo ay dhibaato kala kulan tay bilowgii hirgelinta maqaayadaas waxaa ay sheegtay ineey ku faraxsan tahay hirgelinteeda. Hend waxaa ay dalka degan tahay muddo sanad ah dhibaatada ugu badan ee ay kala kulantay furista maqaayadaas ayaa ugu horeeysa luqada iyo xirriirada dowladda ee dhinac ogolaanshaha.
“Luqada hadaadan si wanagasan u hadleyn waxaad u baahaneeysa tarjumaan taasina waxaa howlaha ka dhigeeysa mid qaataay qaada waqti badan, samirkase waa muhiim” ayey tiri Hend oo ka hadleeysay dhibaatooyinkii ka hor yimid markii ay maqaayada furtay. Waxaa ay sheegtay in culeyska dhinaca luqada ka hor istaagin hirgelinta hamigeedii ee ay muhiim tahay in qofka naftiisa ku kalsoonaado da daalkana la yimaado.
Wareysiga shaqada & Sweden
Soomaalida Iswiidhan oo dooneeysa ineey gacan ka geeystaan dib u dhiska Soomaaliya